लक्ष्मण खनाल, युएई,
नेपालीहरुलाई बैदेशिक रोजगारीका लागि एक राम्रो गन्तव्य मानिएको देश हो संयुक्त अरब इमिरेट्स(युएई) । सन १९७७ मा नेपाल र युएई विचमा दौत्य सम्बन्ध भए पश्चात यहाँ नेपाली कामदार को लागि रोजगारको बाटो खुलेको हो । सन् १९८४ मा नेपाल बायु सेवा निगम (तत्कालीन शाही नेपाल बायु सेवा निगम) ले युएईमा ट्रान्जिट पाएको थियो । साथ साथै युएई मा विकासले गति लिन थाले पछि दिनानुदिन नेपाली हरुको संख्या
कतारमा सुखद यात्राको दुखद अन्त्य
अंग्रेजी महिनाको फेब्रुअरी मसान्त मास । कतारमा शुक्रवारे छुट्टी मनाउने पूर्वनियोजित योजनाअनुरुप शुक्रवार आउनु अघि नै रात्रिकालिन १० बजे तिर नयाँ नम्वरको सेलफोनबाट ताराम्तार घण्टी बजिरह्यो । “हेलो तँ मान्छे बोलेको होस् नि होइन ?” अनौठो अपरिचित आवाज निकालेर प्रश्न गर्दै थियो कोहि मलाई । निसंकोच यस्तो भाउँतो प्रश्न गर्ने पक्कै पनि टाढाको मान्छे होइन भन्ने अन्दाज त मैले गरिसकेको थिएँ । तर यहि हो भनेर
प्रिय बहिनी, नेपालका हरेक एफ एम रेडियो तथा स्थानीय टेलिभिजन च्यानलहरुका पृष्ठभूमिमा मालश्रीको धुन गुञ्जिरहेको बेला म पनि त्यसको अलिकति झल्कना मेटाउन दशैँ तिहारको शुभकामना लेख्न बसेको छु । पोहोर झैँ तिमीले त्यहाँ थुप्रै शुभकामना बटुलिसकेको हुनुपर्दछ ।
म तिमीलाई दशैँ तिहार बिशेष सम्झिएर अञ्जुलीभरिको शुभकामना पठाईरहेको छु । मलाई लाग्छ, तिमीलाई पनि नेपालमा दशैँ तिहारको उमंगले छोइसकेको हुनु पर्दछ ।
अरवी भएकी नेपाली महिलालाई भेट्दा
मेघराज सापकोटा, यूएई कुनै गन्तब्य थिएन । गन्तब्य बिनाको यात्रा उद्देस्यहीन नै हुन्छ । हप्ताभरीको थकानलाई मेटाउन उनी कतै ‘लङग ड्राइभ’ मा जान चाहन्थे । कहाँ जाने थाहा थिएन । त्यस्तै बेलुकीको ८ बजेको हुँदो हो हामी यस्तै गन्तब्यबिहिन यात्राको लागि हिँडेका थियौँ ।
रस अल खेइमाको नखीलबाट हामी दुबइ तिर लाग्यौ । १५ किमी अगाडि केएफसी भन्ने सुपरिचित ठाउँ छ । पहिले यो ठाउँ रस अल खेइमाको सबै भन्दा बढी ट्राफि
आखिर दुःख भोग्नेलाई जहाँ पुगेपनि त्यसको खाँचो हुन्न । म पनि त कहाँ भाग्यमानी रै'छु र ? धन कमाउन आएको म तनाव कमाएर बाँचेको छु । सायद देउता पनि हामीजस्ताका लागि त बैरी नै हुन्छन् क्यारे ?
मेरो घर पूर्वी नेपालमा पर्ने संखुवासभा जिल्लाको मादि हो । दुई पटक गरेर मैले मलेसियामा ५ बर्ष बिताएँ । घरको आर्थिक कारण नै पहिलो हो म विदेशीनुको आर्थिक रुपमा कमजोर भएपछि र आम्दानीको श्रोत भरपर्दो नभएपछि के नै गर्न
प्रवासी श्रमः समस्या समाधानको प्रारम्भिक पाइला
विन्दा पाण्डे, काठमाडौं । प्रवासको श्रम नेपालीको नियति र संस्कार नै बनिसकेको छ । सन् १८१६ मा नालापानीको युद्धमा साम्राज्यवादी अंगे्रजसँग वीरतापूर्वक लडेर पनि हार खेप्नु परेको पीडा साच्चै राष्ट्रवादी नेपालीले सहन गर्न सकेनन् ।
जसका कारण अंग्रेजसँग वदला लिने नाममा बलभद्र कुँवर विदेशी सेनामा गएर पनि अंग्रेज विरुद्धको लडाईं लडे । तर, विडम्वना तत्काल उनको मनमा लागेको चोट निको हुन सकेन । उनको उतै मृत्य